Ambongadiny High efficace mini pleat sivana factory sy mpamatsy | kejia
Ny sivana avo lenta mini-effettique avo lenta dia mampiasa ny lakaoly miempo mafana ho mpanasaraka, izay mety amin'ny famokarana mekanisialy. Ho fanampin'izany, manana tombony amin'ny habetsahan'ny boky kely izy, lanja maivana, mora apetraka, fahombiazan'ny milamina ary hafainganan'ny rivotra. Amin'izao fotoana izao, ny sivana maro be takiana amin'ny atrikasa madio sy toerana misy fepetra takiana amin'ny fahadiovana avo lenta dia ny firafitry ny diaphragm malalaka.
Ny haavon'ny sivana dia avy amin'ny H11 H12 H13 H14 U15
Amin'izao fotoana izao, ny efitrano fidiovana A-kilasy dia matetika mampiasa sivana mini pleat avo lenta ary ny FFU koa dia manana sivana mini pleat avo fahombiazana. Raha ampitahaina amin'ny sivana haingam-pandeha avo lenta, eo ambanin'ny haavon'ny rivotra mitovy amin'izany, dia misy tombony amin'ny haben'ny kely, lanja maivana, rafitra matevina, asa azo itokisana, fitaovana mety, herinaratra maharitra ary hafainganan'ny rivotra. Eo ambanin'ny fenitra mitovy amin'izany, ny tahan'ny rivotra dia tsy mitovy amin'ny habetsahan'ny loto, sivana mini pleat> sivana fisarahana.
1. Fahombiazan'ny filtration avo, lanja maivana ary firafitra mifangaro.
2. Mifanohitra amin'ny harafesina ary tsy mora maniry ny zavamiaina bitika.
3. Fiainana maharitra sy sarany ambany.
4. Afaka namboarina mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpampiasa izy io.
Ny sivana avo lenta tsy misy fizarazarana dia ampiasaina amin'ny filtration avo lenta amin'ny faran'ny rivotra ivoho, izay be mpampiasa amin'ny efitrano madio sy ny sehatra hafa misy fepetra henjana amin'ny fanadiovana ny rivotra.
Ny fitaovana sivana dia fibre fitaratra hydrophobic tsara, ary ny fitaovana sivana mitohy mitohy dia adhesive mafana. Raha ny filazan'ny mil-std-282 0.3um 99.97%, 99.99% ary 99.999% (na araka ny eni822 mppsh10-h14) HEPA. Ny fitaovana amin'ny endriny ivelany dia extrusion aluminium anodized. Ity efijery sivana ity dia mety amin'ny efi-trano tsy misy vovoka, toeram-piasana tsy misy vovoka, sehatra fandidiana tsy miasa volo ary vondrona efijery fanasivan'ny rivotra.
Endri-javatra: ny sivana miloko tsy misy fisarahana manome endrika maro isan-karazany, izay mety amin'ny fepetra fanadiovana hentitra ao amin'ny efitrano tsy misy vovoka, toeram-piasana tsy misy vovoka, sehatra fiasa tsy miasa ary vondrona mpanivana rivotra. Ny habetsaky ny rivotra, ny fihenan'ny tsindry voalohany ary ny vokatry ny fanangonana vovoka an'ny sivana andiany kely dia tsara kokoa noho ny an'ny sivana fizarazarana. Ny famolavolana mini fold dia natao hanitarana ny androm-piainan'ny efijery sivana ary hampihena ny fihenan'ny tsindry. Noho ny fangatahana toetra mampiavaka ny indostria, amin'ny fisafidianana ireo zavatra azo ampiasaina dia afaka manome fitaovana fanivanana boron ambany ihany koa ny orinasa hanamboarana sivana terminal izay mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
Fitaovana sivana: ny fitaovana sivana apetraka ao anaty vatan'ny vondrona mivalona vita amin'ny fibre fitaratra tsara, ary ny taratasy sivana kosa dia nosarahan'ny adhesive mafana, izay tsy hamoaka ny fahalotoana simika ao amin'ny efitrano tsy misy vovoka, hahafahan'ny rivotra mandalo ny efijery sivana misy fatiantoka ambany.
Sarin'ny ivelany: ny lafiny anatiny amin'ny endriny ivelany dia voaisy tombo-kase amin'ny tombo-kase hisorohana ny banga sy ny fivoahan'ny fitaovana sivana. Ny endriny extrusion aluminium dia namboarina mba hampitombo ny hamafiny sy ny faharetany. Ny lakaoly PU dia ampiasaina hamehezana ny vatan'ny extrusion aluminium mba hahatratrarana ny fihenan'ny rivotra tanteraka ary tsy misy famoahana.
Teo aloha: Sivana simika
Manaraka: Fanadiovana robot
Mini Pleat sivana